Uhlobo olusha lweLinux 5.13 luza nokuthuthuka kwezokuphepha, ukuxhaswa kwe-Apple M1 nokuningi | Kusuka kuLinux
Uhlobo olusha lweLinux 5.13 lufika nokuthuthuka kwezokuphepha, ukuxhaswa kwe-Apple M1 nokuningi
Izolo ILinus Torvalds ikhishwe inguqulo ye-Linux kernel 5.13 lapho unikezwa khona ukusekelwa kokuqala kwe-Apple M1 chip entsha ngokusekelwa okuyisisekelo, izici zokuphepha ezintsha kweLinux 5.13 efana neLandlock LSM, ukwesekwa kweClang CFI kanye nokukwazi ukwenza i-kernel stack offset kukholi yohlelo ngalunye, kanye ne-sUkusekelwa kweFreeSync HDMI kanye nokuqaliswa kokuqala kwe-Aldebaran, phakathi kwabanye.
Cishe u-47% wazo zonke izinguquko ezethulwe ku-5.13 zihlobene nezishayeli zedivayisi, cishe u-14% wezinguquko uhlobene nokuvuselela ikhodi ethile yezakhiwo zehadiwe, i-13% ihlobene nesitaki senethiwekhi, i-5% ihlobene nezinhlelo zamafayela ne-4% ehlobene kumasistimu angaphansi we-kernel.
AbakwaTorvalds babize le nguqulo entsha ngokuthi "inkulu impela."
“Sibe neviki elithule kakhulu kusukela ku-rc7, futhi angiboni sizathu sokubambezeleka ngo-5.13. Ukuqoqwa kwesonto kuncane, kwenziwa kuphela okungu-88 okungasetshenziswanga (kanti okunye kwakho kungukuhlehla nje). Vele, ngenkathi isonto eledlule belilincane futhi lithule, i-5.13 isiyonke inkulu impela. Eqinisweni, inenye yezinguqulo ezibaluleke kakhulu ze-5.x, ezinokwenza okungaphezu kwe-16.000 (ngaphezulu kwe-17.000 uma ubala ukuhlanganiswa), kusuka kubathuthukisi abangaphezu kuka-2.000 XNUMX. Kepha lokhu kuyinto ejwayelekile, hhayi into ethile ehlukaniswa ngohlamvu lwayo olungavamile, ”kubhala uTorvalds.
Izici ezintsha eziyinhloko zeLinux 5.13
Esinye sezici ezintsha ezibaluleke kakhulu ze-Linux kernel 5.13 yifayela le- ukusekelwa kokuqala kwama-chip M1 we-Apple, lapho okwamanje unokuxhaswa kwehadiwe kuphela nokwenza ikhodi kuphela, kepha ukulindelwa okuningi kulindelwe. Ukushesha kwehluzo akukatholakali, kepha kulindeleke ukuthi ezinhlotsheni ezilandelayo ukusekelwa kokuqala kuzobe sekukhona nakho.
Ezinye izindaba ezethulwe ku-Linux 5.13 maqondana nokuphepha yi- I-Landlock, eyimodyuli entsha yezokuphepha engaqhutshwa eceleni kwe-SELinux ukuphatha kangcono izinqubo. Ivumela ukukhawulela ukuxhumana nezinqubo zeqembu lezemvelo langaphandle futhi yathuthukiswa ngenhloso yezindlela zokuzihlukanisa ezifana ne-Sandbox, i-XNU, i-Capsicum's FreeBSD ne-OpenBSD Pledge / Unveil.
Ngosizo lwe-Landlock, noma iyiphi inqubo, kufaka phakathi leyo engagxilile, ingahlukaniswa ngokuthembekile futhi uvikele ukweqa ukuhlukaniswa uma kwenzeka kuba sengozini noma kushintshwa uhlelo lokusebenza olunonya. I-Landlock inika inqubo inqubo yokwakha amabhokisi okulahla udoti aphephile asetshenziswa njengongqimba olwengeziwe ngaphezulu kwezinqubo ezikhona zokulawula ukufinyelela kohlelo. Isibonelo, uhlelo lungavimba ukufinyelela kwamafayela angaphandle kwesiqondisi esisebenzayo.
Futhi izithuthukisi ezakhiweni ze-RISC-V zigqanyisiwe, ngoba kule nguqulo entsha yokusekelwa kwe-kexec, ukuqhuma kokuphahlazeka, i-kprobe nokwethulwa kwe-kernel kwenziwa endaweni yayo (ukwenziwa endaweni, ukwenziwa kusuka kokuphakathi, ngaphandle kokukopishela ku-RAM).
Futhi Kumaprosesa wesimanje e-Intel, isilawuli esisha sokupholisa sitholiwe, Ukuxhaswa kokuqala kwanikezwa nezinhlelo ezintsha zalo mkhiqizi, uphawu lwe-Alder Lake-S (isizukulwane se-12).
Ngenkathi ye- I-AMD igqamisa ukuxhaswa kweFreeSync ngaphezulu kwe-HDMI, ukusekelwa kwe-ASSR (Alternative Encoder Seed Setha kabusha), ioctl ukubuza ukufaka amakhodi wevidiyo nokukwazi ukwenza amakhodi, nemodi CONFIG_DRM_AMD_SECURE_DISPLAY ukuthola izinguquko ezikrinini ezibonisa imininingwane ebalulekile. Kungezwe ukusekelwa kwendlela yokonga amandla ye-ASPM.
Kwezinye izinguquko ezigqamile yale nguqulo entsha yeKernel:
Ukusekelwa kwesici sokulahlwa kwebhafa yokuhumusha kanyekanye (TLB) ukuthola ezinye izinzuzo zokusebenza okuncane Empeleni, umsebenzi wokuphathwa kwememori ye-Linux 5.13 x86 uhlinzeka ngokusebenza okuncane okuzuzisa ikakhulukazi ekukhanyeni kokuvikeleka kwe-CPU eminyakeni yamuva ethinta i-TLB.
Ukusekelwa kwe-AMD Zen yeTurbostat.
Ubakaki kaLoongson 2K1000.
I-KVM inikeza izithuthukisi ze-AMD SEV ne-Intel SGX yemishini ebonakalayo yezivakashi.
Ukusekelwa kokutholwa kokukhiya ibhasi le-Intel kungezwe ngaphezu kokusekelwa okukhona kokuthola ukukhiya okwehlukanisiwe.
I-KCPUID iyinsiza entsha esihlahleni ukusiza ukulungisa amaprosesa amasha we-x86.
Umshayeli wokubonisa ojwayelekile we-USB wengezwe kuma-setups afana nokusebenzisa i-Raspberry Pi Zero njenge-adaptha yokubonisa.
Ukusekelwa kwe- "Intel DG1 Platform Monitoring Technology" / ipulatifomu ye-telemetry.
Umshayeli we-POWER9 NVLink 2.0 ususiwe ngenxa yokushoda komthombo ovulekile womsebenzisi wokusekela.
Ukubuyekezwa komshayeli we-Direct Rendering Manager.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Uhlobo olusha lweLinux 5.13 lufika nokuthuthuka kwezokuphepha, ukuxhaswa kwe-Apple M1 nokuningi
I-IPFS 0.9 iza nohlelo lwayo lokuxazulula i-DNS, izithuthukisi zokuphepha nokuningi
I-Cube 2 Sauerbraten: Omunye umdlalo omnandi futhi wanamuhla we-FPS we-GNU / Linux